Manohitra Ny Fakana Lahatsary Miafina Avoaka Fahitalavitra Ny Mpikatroky Ny Zon'ny Pelaka ao Zeorzia	Voadika ny 20 Janoary 2013 8:40 GMT
Zarao: Nanambara [ka] ny sampan-draharahan'ny Fampanoavana ao Zeorzia tamin'ny 14 Janoary 2013, fa naka lahatsary miafina ireo olona fanta-daza manao firaisam-batana amin'ny olona mitovy fananahana aminy ny lehiben'ny Polisy[-n'ny] Miaramila teo aloha Megis Kardava. Nolazain'ilay sampan-draharaha fa nampiasaina hanerena (chantage) ireo olona fanta-daza ireo hiara-miasa amin'ny governemantan'ny filoha Mikheil Saakashvili ireny lahatsary ireny.
Na dia natao manjavozavo aza ny sary dia misy ny sasany milaza fa mbola azo nofantarina ao amin'ny lahatsary ihany ireo lehilahy hita ao ary nilaza ny heviny ny vondrona mpiaro ny zon'ny vitsy an'isa fa mety mampidi-doza ireo azo sary ny lahatsary mivoaka amin'ny firenena, tahaka an'i Zeorzia, izay maro dia maro an'isa ny ôrtôdôksa. Maro ireo fikambanana mpandala ny zon'olombelona, tahaka ny LGBT Georgia [ka] no niangavy ny manampahefana hampitsahatra ny famoahana ireo lahatsary ireo amin'ny alalan'ny fantsona fahitalavitra:
Amin'ny hevitrareo dia tsy misy tombontsoan'ny olona amin'ny fahitana ireo lahatsary narakitra miafina ireo, nefa misy ny tombontsoa lehibe ho an'ny olona tafiditra ao amin'ity raharaha ity ka [maniry] ny mba hananan'izy ireo fiainana manokana voaaro. Araka ny dradradradrain'ny fikambanana ihany koa dia misy Fitsipi-pitondra-tenan'ny Mpampiely feo sy sary [pdf] tsy voahaja satria :
tsy mahazo mampiseho fandaharana vetaveta mialoha ny sasakalina fa mahazo miresaka na miady hevitra momba ny fananahana anelanelan'ny amin'ny 8 ora alina ka hatramin'ny 11 ora alina raha toa ka mahaliana ny olona sy amin'ny endrika madio [manokana]. Nolazain'ny Fitsipi-pitondra-tena ihany koa rehefa mitatitra raharahan-keloka “ny hitadiavan'ny mpampiely feo sy sary izay handanjalanjàna ny fahalalaham-pitenenana sy ny fametrahana mialoha ny olona ho tsy mbola meloka sy fanajana ny fiainana manokan'ny ahiahiana, voampanga, voaheloka, vavolombelona ary ny niharany [lasibatra].”
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraTamara Mirianashvili
Azia Afovoany sy KaokazyZeorzia
Media sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaPolitikaZon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)Zon'olombelona